अस्ट्रेलिया काण्ड : फेसबुक र युट्युबमा भाइरल, प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दै | Kendrabindu Nepal Online News
९ माघ २०७६, बिहीबार १४:१८
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको ‘अस्ट्रेलिया काण्ड’ को बारेमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको छ । नेपाली युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी फेसबुकमा ‘अस्ट्रेलिया काण्ड’ भन्दै विभिन्न लिंकहरू सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
केन्द्रीय साइबर अपराध ब्यूरोका एसएसपी नवीन्द्र अर्यालले घटनाको बारेमा जानकारी आउनासाथ यस विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया थालेको जानकारी दिए । घटनाको वास्तविकता बुभ्mने काम भइरहेको बताउँदै एसएसपी अर्यालले भने, “घटनाको बारेमा हामी सूूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौं, अहिले पनि हामी यसै विषयमा बुझिरहेका छौं ।”अर्यालले घटनाको विषयमा अहिलेसम्म कोही कसैले पनि उजुरी नगरेको बताए ।
‘अस्ट्रेलिया काण्ड’ के हो ?
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला शारीरिक सम्बन्धसम्बन्धी एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । यही भिडियोलाई ‘अस्ट्रेलिया काण्ड’ भनिएको हो । यो भिडियोमा देखिएकी युवती अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली हुन् भनेर चर्चा भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न ग्रुप र इनबक्सहरूमा यो भिडियो शेयर गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू पार्ट १, २, ३ भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
भिडियोमा युवाको अनुहार देखिएको छैन तर युवतीको अनुहार भने देखिएको छ । अहिले गुगलमा यसका क्लिप खोज्नेहरू धैरै छन् । गुगलमा अस्ट्रेलिया काण्ड, अस्ट्रेलिया काण्ड लिंक, अस्ट्रेलिया काण्ड २०२०, अस्ट्रेलिया काण्ड न्यूज, अस्ट्रेलिया काण्ड लेटेस्टजस्ता शब्दहरूले खोजी भएका छन् ।
फेसबुक र गुगलमा मात्रै होइन युट्युबमा पनि यसको भिडियो खोज्नेहरूको जमात बाक्लो छ । त्यसो त युट्युबमा पनि विभिन्न सनसनीपूर्ण शीर्षक दिएर यससम्बन्धी सामग्री बनेका छन् ।
वास्तविकता नबुझी अस्ट्रेलिया काण्डका नाममा भिडियो भाइरल बनेपछि अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली र उनका परिवारलाई अप्ठेरो महसुस हुन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ती युवती नेपाली हुन् र उनी अस्ट्रेलियामा बस्छन् भनेर चर्चा भइरहे पनि वास्तविकता भने बेग्लै छ । न उनी नेपाली हुन् न त यो भिडियो अस्ट्रेलियाको नै हो । उसो भए वास्तविकता के त ?
यो भिडियो दुई साताअघि नै अपलोड भएको हो । यो भिडियो अस्ट्रेलियामा नभई अमेरिकाबाट अपलोड भएको हो । अमेरिकाको न्यू जर्सीका नागरिक लुइस बाज्लरले यो भिडियो अपलोड गरेका हुन् । उनले यो भिडियो आफ्नो एडल्ट साइटमा अपलोड गरेका थिए ।
भिडियो अप्लोड गरिएको च्यानल छोटो समयमै चर्चित र भेरिफाइ भएको च्यानल हो । उक्त च्यानलमा अहिलेसम्म यससम्बन्धी १० वटा भिडियो अपलोड भएका छन् । उनले अपलोड गरेका भिडियोका ससाना क्लिप्स यतिबेला नेपाली युवाहरूले अस्ट्रेलिया काण्ड भन्दै शेयर गरिरहेका छन् । लुइसले यो भिडियो आर्थिक आम्दानीका लागि अपलोड गरेका हुन् ।
Prevअमेरिकी सीमातर्फ हिँडेका २ हजार व्यक्ति मेक्सिकोमा पक्राउ
अस्ट्रेलियामा अग्निनियन्त्रक विमान दुर्घटना, चालक दलका तीन अमेरिकीको मृत्युNext